CVE Series Magnet Synchronous Inverter Centrifugal Chiller ụlọ ọrụ na ndị na - eweta ya | Ikuku
CVE Series adịgide Igwe Ọdụdọ Synchronous Inverter Centrifugal Chiller
High-ọsọ na-adịgide adịgide magnetik synchronous inverter moto
A na-eji PMSM nwere nnukwu ike na ọsọ ọsọ ụwa eme ihe maka chiller a. Ike ya dị elu karịa 400 kW na ntụgharị ọsọ ya karịrị 18000 rpm. Igwe ọkụ dị elu karịa 96% na 97.5% ruo na nke kachasị, dị elu karịa ogo 1 mba na arụmọrụ moto. Ọ bụ kọmpat na fechaa. PMSM 400kW dị ọsọ ọsọ dị otu ihe dị ka ihe ntinye 75kW AC. Site n'inwe ikuku na-agba agba friji na-agba ume iji mee ka stator na rotor dị jụụ, enwere ike ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ na gburugburu 40 ℃, na-eme ka arụ ọrụ dị mma.
Igwe na-agba ọsọ ọsọ nke ikuku dị elu nke abụọUnit adopts elu-ọsọ moto kpọmkwem-chụpụrụ abụọ-ogbo impeller. A na-kagbuo ọsọ ọsọ na nrịbama radial 2, nke ga-eme ka arụmọrụ ka mma ma belata ọnwụ nke igwe ma ọ dịkarịa ala 70%. Na kpọmkwem mbanye na mfe Ọdịdị, Compressor na-arụ ọrụ reliably na obere size. Olu na ibu nke compressor bụ naanị 40% nke otu ikike ot compressor. Na-enweghị nnukwu-mkpọtụ nke ọsọ-elu gia, Compressor na-arụ ọrụ ụda dị ezigbo ala. Nke ahụ bụ 8dBA dị ala karịa otu ngalaba.
Ọnọdụ niile "wideband" na-eme pneumatic imewe
A na-emepụta impeller na diffuser iji ghọta arụmọrụ dị elu nke Compressor n'okpuru ibu 25-100%. Tụnyere ot imewe na dabere na zuru ibu ọrụ, a imewe nwere ike belata Compressor si arụmọrụ attenuation. Ot inverter centrifugal chiller ọfiọkde ikike ịchịkwa site agbanwe ọsọ nke Compressor na agbanwe oghere n'akuku nke ndu vane nke na-amalite na-agbada n'okpuru 50 ~ 60% ibu. Agbanyeghị, Greek CVE usoro centrifugal chiller nwere ike ịgbanwe ọsọ nke compressor n'okpuru 25 ~ 100% ibu iji belata ntụgharị nke ndu ndu ma melite arụmọrụ arụmọrụ n'okpuru ọnọdụ niile.
Etinyela ntụgharị ntụgharị
Site na ịnwe ọnọdụ teknụzụ na-enweghị ntụpọ, a na-edobe rotor moto n’enweghị nyocha. Site na teknụzụ na-agbazi PWM nwere ike ịgbanwe ya, onye ntụgharị nwere ike iwepụta sine dị mma iji melite arụmọrụ moto. Inverter na-arụnyere na unit, na-azọpụta ala ohere maka ndị ahịa. Na mgbakwunye, a na-ejikọ wires nkwukọrịta niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji melite ntụkwasị obi nke otu.
Low viscosity vane diffuser
Uzo di iche nke viscosity vane diffuser na ndu ndu uzo ikuku nwere ike igbanwe ngwa ngwa gas n'ime nnukwu ikuku gas nke oma iji ghaghachite mgbake. N'okpuru ibu anya, ntụgharị vane na-ebelata mbugharị azụ, na-emeziwanye ọrụ ibu ọrụ, ma na-agbasawanye usoro ọrụ otu
Abụọ-ogbo mkpakọ technology
Tụnyere otu-ogbo friji usoro, abụọ-ogbo mkpakọ mma mgbasa arụmọrụ site 5% ～ 6%. Compressor rotational ọsọ na-lowered mere na Compressor bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi na inogide.
Akwa-arụmọrụ hermetic impeller
Compressor impeller bụ ternary hermetic impeller, nke na-arụ ọrụ nke ọma ma bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi karịa onye na-enweghị ike ịchọta ya. Ọ na - anabata ụdị akụkụ 3 akụkụ airfoil ka ọ bụrụ ihe na - agbanwe agbanwe. Site na njedebe nyocha, 3-ịhazi igwe nyocha, ule nyocha siri ike, nnwale ọsọ ọsọ na ule n'ezie n'okpuru ọnọdụ ọrụ, ọ dị n'aka na impeller na-ezute imewe chọrọ ma nwee ike ịrụ ọrụ siri ike. Impeller na isi osisi ịmụta keyless njikọ, nke nwere ike izere ele mmadụ anya n'ihu nchegbu ịta na rotor si mmako anya-itule nke kpatara site na isi njikọ, si otú ahụ ka mma Compressor si arụ ọrụ kwụsie ike.
Akwa-arụmọrụ okpomọkụ Exchanger
Ezubere ikpo ọkụ ọkụ na-adabere n'usoro ikpo ọkụ. A kachasị ya iji belata ọnwụ ọnwụ na ike oriri. Sub-oyi na-onwem na ala nke condenser. Na otutu eruba mgbochi, sub-jụrụ ogo nwere ike ịbụ na- 5 ℃. Middle ịkpa iche osisi adopts ìhè anwụrụ ahụ bụ ugboro abụọ ka oké dị ka threaded anwụrụ na-sonyeere na-akwado osisi, Ya mere, ọla kọpa anwụrụ ga-mebiri emebi n'okpuru mmetụta nke elu-ọsọ refrigerant. 3-V grooved tube efere imewe ka nakweere na-ekwe nkwa akara mmetụta.
Advanced akara ikpo okwu
A na-eji CPU 32-bit CPU na DSP ihe mgbaàmà dijitalụ arụ ọrụ arụ ọrụ dị elu. Nchịkọta nchịkọta data dị elu na ikike nhazi data na-eme ka njirimara oge na njirimara nke njikwa usoro. Tinyere ihe ngosi LCD mara mma, onye ọrụ nwere ike ịghọta njikwa akpaaka na njikwa aka na nbipu. Ọ na - ejikwa usoro ọgụgụ isi Fuzzy-PID na - achịkwa algorithm, nke ejikọtara ya na teknụzụ nwere ọgụgụ isi, teknụzụ fuzziness na njikwa PID na - achịkwa algorithm, nke mere na sistemụ nwere ike ịza ọsọ ọsọ ọsọ na arụmọrụ kwụsiri ike.
Nke gara aga: Nozulu Diffuser
Osote: Fresh Ikuku Disinfection Box maka HVAC System
Chilọ Ọrụ Chiller Industriallọ Ọrụ
Rewghasa Chiller System
Mmiri Chiller Sistem